मिचाहा झारको बिगबिगी- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
चितवन निकुञ्जका घाँसे मैदानमा ‘पार्थेनियम’को हिस्सा ६ प्रतिशतभन्दा बढी
चितवन — हेर्दा पातीजस्तो देखिने तर हानिकारक झार पार्थेनियम अहिले खेतबारी, वनपाखा र बाटो छेउछाउ जताततै देखा पर्न थालेको छ । यो झार पर्यावरण, कृषि र मानव स्वास्थ्यका लागि खतरनाक रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
झार फैलिएको तुलनामा यसलाई नष्ट गर्ने उपायको चर्चा हुने गरेको छैन । बेलैमा ध्यान नदिए यसले संकट ल्याउन सक्ने वनस्पति विज्ञहरूको चेतावनी छ ।
अस्ट्रेलियाबाट सन् २००७ देखि २०१५ सम्म अध्ययन, अनुसन्धानका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा विद्यार्थीको एउटा समूह आएको थियो । सन् २०११ मा उनीहरूले निकुञ्जमा एउटा झार देखे । त्यो झार अस्ट्रेलियामा निकै फैलिरहेको पार्थेनियम थियो । त्यसयता चितवन सौराहामा रहेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको कार्यालयका प्रमुख बाबुराम लामिछानेले यो झारका बारेमा निरन्तर चासो दिँदै आएका छन् । ‘सुरुमा थोरै ठाउँमा थियो । अहिले धेरै ठाउँमा देखिन्छ,’ लामिछानेले भने । हालै सम्पन्न गैंडा गणनामा घाँसे मैदानमा के कस्ता मिचाहा झारहरू छन् भन्ने विवरण लिन गणकहरूलाई भनिएको थियो । ‘गणनाका बेला संकलन गरेको विवरणमा पनि घाँसे मैदानमा पार्थेनियमले ६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखियो । सन् २०१५ को गणनामा २ प्रतिशत थियो । यसले पनि पार्थेनियम बढेको देखाउँछ,’ लामिछानेले भने ।
यो पटक गैंडा गणना हुँदा पार्थेनियम राम्रोसँग उम्रने बेला भइसकेको थिएन । त्यसैले यसको फैलावट अझै बढी भएको लामिछानेले बताए । ‘यो मिचाहा प्रजाति हो । यसले अरू घाँस, झार उम्रन, फैलन रोक्छ । जनावरले खाँदैन,’ लामछिानेले भने, ‘निकुञ्जभित्र जनावरका लागि बनाइएको घाँसे मैदान ढाकेपछि संरक्षणमा नै समस्या आउने देखियो ।’ मानव स्वास्थ्यका लागि पनि यसले असर गर्छ ।
यसबारे अध्ययन गर्दै आएका भरत श्रेष्ठ सन् १९६७ मा नै यो झार नेपालमा देखा परेको दाबी गर्छन् । भारतमा त्योभन्दा १० वर्षअघि नै देखिएको थियो । सन् ९० को दशकपछि यो झार देशका विभिन्न भागमा फैलन थाल्यो । चितवनलगायत ठाउँमा तीव्र रूपमा फैलिएको १० वर्ष जति भएको लामिछाने बताउँछन् । अहिले नेपालको चुरे, महाभारत, हिमाली क्षेत्र र पूर्वदेखि पश्चिम सबै ठाउँमा पुगेको छ । ‘जहाँ–जहाँ मोटरबाटो गयो, त्यहाँ यो पुगेकै छ,’ श्रेष्ठले भने । गाडीसँगै सरसामान र मानिसकै माध्यमबाट यो झार फैलिएको उनले बताए । ‘यो झार पानी जमेको ठाउँमा उम्रँदैन । त्यसैले धानबालीमा असर गर्दैन । तर अन्य कृषि बालीको उत्पादन घटाउँछ,’ उनले भने, ‘अफ्रिकी महादेशमा यसलाई भोकमरी ल्याउने झार भन्न थालेका छन् ।’
उनका अनुसार यो घाम राम्रोसँग पर्ने खुला पाखामा उम्रन्छ । ‘गाईबस्तुले खान्न तर यो झार भएको ठाउँमा चर्ने गाई, भैंसीको दूध खाँदा स्वाद तीतोतीतो हुने गरेको छ । यसको फूलको परागकण हानिकारक हुन्छ । गाईबस्तु चर्दा अन्य घाँसमा खसेको परागकणले पनि यस्तो असर गरेको होला,’ उनले भने ।
यसको परागकणले मानिसलाई पनि गम्भीर असर गर्ने उनको भनाइ छ । छालामा एलर्जी हुने, दमजस्तो श्वासप्रश्वासमा समस्या आउने उनले बताए । ‘यसको असरले नेपालमा कसैको मृत्यु भएको जानकारी त छैन तर भारतमा भने मरेका छन्,’ उनले भने । नेपालमा जताततै फैलिए पनि महामारीको रूप अझै नलिएको उनले बताए । त्यसैले बेलैमा नियन्त्रणमा लिए गम्भीर परिणामहरू भोग्नु नपर्नेमा उनले सचेत गराए । उनका अनुसार फूल नफुल्दै काटेर नष्ट गर्नु नै पार्थेनियम नियन्त्रणको मुख्य र प्रभावकारी उपाय हो । यसलाई खाने एउटा खपटे किरा पनि देखा परेको छ । ‘तर त्यो पर्याप्त छैन,’ उनले भने ।
हरेक स्थानीय तहले यसको नियन्त्रणका बारेमा सोच्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । निकुञ्जभित्र फैलिए पनि यसैलाई केन्द्रित गरेर नियन्त्रणका काम भने भएको छैन । ‘घाँसे मैदान व्यवस्थापनको काम हुँदा पार्थेनियम पनि काटेर फाल्ने गरिएको छ,’ निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत बरालले भने । नछिप्पिँदै काटे फेरि पलाउने खतरा रहन्छ । त्यसैले उपयुक्त बेलामा नष्ट गर्नुपर्छ ।
फागुन–चैतमा अरू उपयोगी घाँस नउम्रँदै यो उम्रन्छ । यसले जमिन ढाकेपछि जीव जनावरले खाने घाँस उम्रन, हुर्कन रोकिन्छ । एउटा बोटबाट ३० हजार बिरुवाका लागि बीउ तयार हुने लामिछाने बताउँछन् । यसको बीउ १५ वर्षसम्म नबिग्री बस्न सक्ने गुणको भएको अर्का अध्ययनकर्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । त्यसैले नफैलँदै नियन्त्रणमा लिए पर्यावरण, कृषि र मानव स्वास्थ्यमा घातक असर भोग्नु नपर्ने उनले बताए ।
प्रकाशित : श्रावण ८, २०७८ ०९:५३
यसरी जुट्दै छ खोप
श्रावण ८, २०७८ अतुल मिश्र
काठमाडौँ — भण्डारणको समस्या रहे पनि कोभिड–१९ विरुद्धको खोप जुट्ने क्रम जारी छ । हालसम्म देशभर करिब १० प्रतिशतले एक मात्रा खोप लगाइसकेका छन् । चीनसँग खरिद गरिएको ४० लाखमध्ये बिहीबार ८ लाख डोज आइपुगेको छ भने शुक्रबारदेखि बाँकी २४ लाख आउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि ८ लाख डोज आइसकेको छ ।
जापानबाट कोभाक्स सुविधामार्फत अस्ट्राजेनेकाको १६ लाख डोज आउने प्रक्रियामा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले बताए ।
‘साउनभित्र चीनबाट जम्मा ५० लाख मात्रा आइपुग्छ,’ उनले भने, ‘१८ वर्षमाथिका ७२ प्रतिशत अर्थात् करिब २ करोड १७ लाखलाई निःशुल्क खोप लगाउने तयारी छ । एक तिहाइ जनसंख्यालाई असोजभित्रै खोप लगाइसक्छौं ।’ विज्ञहरूले कम्तीमा ६० प्रतिशतभन्दा बढीलाई खोप लगाए मात्रै कोभिडको सम्भावित लहरबाट जोगिन सक्ने बताएका छन् । अबको केही महिनामा लक्षित समूहमा खोप लगाइने डा. अधिकारीको भनाइ छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली समकक्षी शेरबहादुर देउवासँग सोमबारको टेलिफोन संवादमा खुला सीमा भएका दुवै मुलुकले कोरोना महामारीविरुद्ध मिलेर लड्नुपर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यसलाई कतिपयले नेपालले खरिद गरेको बाँकी खोप भारतले छिटै दिने संकेतका रूपमा बुझेका छन् । नेपालका नागरिकलाई भारतकै गतिमा खोप सुनिश्चित नभए यसको नकारात्मक असर भारतमा समेत पर्ने देखिएको छ । भारतले कोभिसिल्डबाहेक कोभ्याक्सिन खोपसमेत दिन सक्ने संकेत मिलेको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले बतायो । भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासँग प्रतिमात्रा ४ अमेरिकी डलरमा खरिद गरिएको कोभिसिल्डको १० लाख मात्रा अझै आएको छैन ।
हालसम्म दुई मात्रा लगाउनुपर्ने ५८ लाख ४८ हजार र एक मात्रा लगाए पुग्ने १५ लाख ३४ हजार ८ सय ५० मात्रा गरी कुल ७३ लाख ८२ हजार ८ सय ५० डोज खोप आइसकेको छ । काठमाडौंमा बुधबारदेखि १८ वर्षमाथिकालाई जोन्सन एन्ड जोन्सनको जान्सेन खोप दिन थालिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले खोप उब्रिएकाले १८ वर्षमाथिकालाई लगाउने निर्णय भएको बताए ।
यसैबीच, कोभिडको डेल्टा भेरिएन्टका कारण खोपको दुवै मात्रा लगाए पनि संक्रमण भइरहेको इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) को नयाँ अध्ययनले जनाएको छ । नेपालमा समेत दोस्रो लहरको मुख्य कारण डेल्टा भेरिएन्टलाई मानिएको छ । भारतमा सय जनामा देखिएको संक्रमणमध्ये करिब ९० संक्रमणमा डेल्टा भेरिएन्ट जिम्मेवार छ । खोप लगाए पनि संक्रमित हुने खतरा कायमै रहेकाले घरबाहिर निस्किँदा उपयुक्त मास्क, सामाजिक दूरी र नियमित साबुनपानी अनिवार्य सर्त रहेको डा. अधिकारी बताए ।
अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन (सीडीसी) ले खोपको पूर्ण मात्रा लिएका व्यक्ति दैनिक गतिविधिमा मास्क नलगाएर सामेल हुन सक्ने बताए पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले डेल्टा भेरिएन्टका कारण मास्क लगाउन सुझाव दिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले महामारीको तेस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन सचेत गराएको छ । भारत सरकारले समेत गत शुक्रबार जोखिम बढ्ने संकेत गर्दै आगामी सयदेखि १ सय २५ दिन कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको जनाएको थियो ।
यसअघि भारतमा देखिएको महामारीको प्रभाव केही दिनपछि नेपालमा पर्ने गरेको थियो । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा.जीडी ठाकुरले भने अब भारतका आधारमा यताको अवस्था आकलन गर्न नसकिने बताए । ‘भारतमा खोप लगाउनेको संख्या बढ्दै गएको छ । त्यहाँकै जस्तो महामारीको अवस्था यता नदेखिन सक्छ,’ उनले भने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले भारतमा पहिलो लहर आएको डेढ महिनापछि र दोस्रो लहर आएको महिना दिनमै नेपालमा त्यस्तै दृश्य देखिएको बताए । भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार त्यहाँ खोप लगाउनेको संख्या ४१ करोड ७८ लाखभन्दा माथि छ भने ३१ दिनदेखि दैनिक संक्रमण दर करिब ३ प्रतिशत छ ।
नेपालमा भने बिहीबार १२ हजार ८ सय २९ नमुनाको पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा २१.१५ प्रतिशत अर्थात् २ हजार ७ सय १४ जनामा संक्रमण देखिएको छ । थप २४ जनाले संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन् ।
साउन लागेयता संक्रमितको संख्या र अनुपातमा क्रमिक वृद्धि देखिनु चिन्ताको विषय रहेको सहप्रवक्ता डा.अधिकारीले बताए । ‘कोभिडले गर्दा जटिल र जोखिम अवस्थाका बिरामी स्वास्थ्य निकायमा भर्ना हुने दरमा समेत वृद्धि देखिएको छ,’ उनले भने ।
प्रकाशित : श्रावण ८, २०७८ ०९:१६